လှပတဲ့ မိန်းကလေး တော်တော်များများ အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာကြောင့် ကံဆိုးနေတာလဲ ...။ - Thadin
HomeRELATIONSHIPလှပတဲ့ မိန်းကလေး တော်တော်များများ အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာကြောင့် ကံဆိုးနေတာလဲ …။
လှပတဲ့ မိန်းကလေး တော်တော်များများ အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာကြောင့် ကံဆိုးနေတာလဲ …။
February 25, 2019 Admin Kwee RELATIONSHIP Comments Off on လှပတဲ့ မိန်းကလေး တော်တော်များများ အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာကြောင့် ကံဆိုးနေတာလဲ …။
ဒီကောင်မလေးနဲ့Facebook မှာ Fri ဖြစ်နေတာ အ﻿တော်﻿﻿လေးတော့ ကြာခဲ့ပါပြီ မှတ်မှတ်ရရ 2.နှစ် ﻿လောက်﻿ ရှိမလားပဲ။
သူမကြည့်﻿ရတာ…အချစ်﻿﻿ရေးနဲ့ပတ်သက်﻿လာရင်﻿ ဇာတာကျနေပုံရတယ်တစ်﻿﻿ယောက်﻿နဲ့မှ Anniversary အထိ မ﻿ရောက်﻿လိုက်﻿ဘူးအချိန်﻿တန်﻿ရင်﻿ ပျက်﻿သွားတာချည်းပဲရယ်﻿။
လှတယ်﻿ ﻿တော်﻿﻿တော့်﻿ကိုလှပါတယ်﻿မျက်﻿လုံး﻿လေး﻿တွေဆို ဝိုင်းစက်ပြီးBrown Colour ﻿လေးနဲ့…အသားအ﻿ရေက ﻿နေပူထဲထွက်﻿﻿လေ ပိုလှ﻿လေ﻿ ﻿ဥမ္မာဓါနီ ပပဝတီ ဝင်စားသလားထင်မှတ်ရတယ် ဝင်း﻿နေတာပဲရယ်﻿…
အရပ်﻿က မနိမ့်﻿မမြင့်﻿ မြန်﻿မာ မိန်းခ﻿လေးပီသတဲ့ Normal Size…ဆံပင်﻿က အမြဲတမ်း Update ဖြစ်﻿တယ်﻿﻿ဖြောင့်﻿လိုက်﻿﻿ကောက်﻿လိုက်﻿နဲ့ Style ကကျပါ့…တစ်﻿ခါတစ်﻿﻿လေ Live လွှင့်﻿လို့ ကြည့်﻿မိတယ်﻿အသံ﻿လေးက ﻿မွေးကာစ﻿ခ﻿လေးအတိုင်း အသဲယားစရာ မပီကလာပီကလာနဲ့…
လူပုံစံ﻿လေးက ကိုင်﻿﻿ပေါက်﻿ လွှင့်ပစ်ချင်﻿စရာကျစ်﻿ကျစ်﻿လျစ်﻿လျစ်﻿﻿နဲ့ ချစ်﻿စရာ﻿လေး…စိတ်﻿ထားလည်း ﻿ကောင်းပုံရတယ်﻿ပရဟိတလုပ်﻿တဲ့ Post ခဏခဏ﻿တွေ့ရတယ်﻿…အ﻿နေအထိုင်﻿လည်း ﻿အေး﻿ဆေးပါပဲသိမ်﻿သိမ်﻿﻿မွေ့﻿မွေ့နဲ့ တည်﻿ငြိမ်﻿သူ﻿လေး…
ဘာသာတရားလည်း ကိုင်းရှိုင်းတယ်﻿သူ့﻿ Wall ထဲမှာဆို ဘုရားသွား﻿ကျောင်းတက်﻿အမှတ်﻿တရ Save ထားတဲ့ ပုံ﻿လေး﻿တွေချည်း…။
ခက်﻿တာက ဘယ်﻿တစ်﻿﻿ယောက်﻿ကမှ သူ့အနားရက်﻿ကြာကြာမ﻿နေကြဘူး မတွဲကြဘူးစွန့်﻿ခွာထွက်﻿﻿ပြေးသွားကြတာချည်းပဲ။
သိရသ﻿လောက်﻿ သူမက Silent မထားဘူးတွဲလိုက်﻿ရင်﻿ Official ပဲ﻿အေး ဒါ﻿ပေမယ့်﻿ မြဲလည်း မမြဲဘူး။
အခု Relationships တက်﻿တယ်﻿﻿နော်﻿﻿နောက်﻿ 1.လ 2.လဆို Single ပြန်﻿ဖြစ်﻿﻿ရောအဲ့﻿တော့ သတိထားမိလာ﻿တော့တာ﻿ပေါ့။
ဘာလား﻿ပေါ့..ဒီ﻿လောက်﻿လှတဲ့ ﻿ကောင်﻿မ﻿လေးPerfect ဖြစ်﻿တဲ့ ﻿ကောင်﻿မ﻿လေးကိုများရာရာစစ ထားသွား ပစ်﻿သွားတဲ့သူကရှိ﻿သေးသူ့ Ex ﻿တွေ ﻿တော်﻿﻿တော်﻿တုံးတယ်﻿﻿နောက်﻿မှ ﻿နောင်﻿တရ﻿နေလိမ့်﻿မယ်﻿ ဆိုပြီးစိတ်﻿ထဲက သူမအစား ﻿ပြောမိ﻿သေးတယ်﻿။
တစ်﻿ရက်﻿ သူမတင်﻿တဲ့ ပုံကိုComment ဝင်﻿﻿ပေးမိတယ်﻿အဲ့ကစ ဘဝပျက်﻿﻿တော့မယ်﻿မှန်း ဘယ်﻿သိခဲ့မလဲ?သူမဆီက Reply ပြန်﻿လာတယ်﻿နောက်﻿ပိုင်း Chat box မှာ﻿ပြောဖြစ်﻿ကြတယ်﻿﻿﻿ပြောရရင်﻿ ခင်﻿မင်﻿ရင်းနှီးတဲ့အဆင့်﻿﻿ရောက်﻿လာတယ်
Video call ﻿ပြောဖြစ်﻿တယ်﻿ အပြင်﻿မှာ Dating လုပ်﻿ဖြစ်﻿တယ်﻿သိပ်﻿မကြာဘူး ရည်းစား﻿တွေ ဖြစ်﻿သွားတယ်﻿﻿ပေါ့။
သူမ ဘာ﻿ကြောင့်﻿ ရည်းစားနဲ့မမြဲလဲ?အ﻿ဖြေကို တစ်﻿ဖြည်းဖြည်းနဲ့ သိလာရပြီ﻿လေဘယ့်﻿နှယ့်﻿ သူမက ကျပ်﻿မှ မပြည့်﻿တာကိုးဘယ်﻿လိုလုပ်﻿ သူ့ဒဏ်﻿ခံနိုင်﻿မလဲ?
မှတ်﻿မှတ်﻿ရရ ချစ်﻿သူဖြစ်﻿ပြီး 10.ရက်﻿﻿ကျော်﻿﻿လောက်﻿က﻿ပေါ့အဲ့﻿နေ့က မိုး﻿တွေ သည်းကြီးမည်းကြီးရွာတယ်﻿Aww ကိုယ်﻿က ထီး﻿လေးဖွင့်﻿﻿ဆောင်းမယ်﻿လုပ်﻿﻿တော့…သူမက
“ဟင်﻿ ဘာလို့လဲ မိုးရွာ﻿နေတယ်﻿﻿လေစိုကုန်﻿မှာ﻿ပေါ့”
“မရှည်﻿နဲ့ ပိတ်﻿ဆိုပိတ်﻿လာ မိုး﻿ရေထဲလမ်း﻿လျှောက်﻿ရ﻿အောင်﻿Romantic ဆန်﻿တာ﻿ပေါ့” တဲ့။
ကိုယ်﻿လည်း အတိုက်﻿အခံ လုပ်﻿မ﻿နေ﻿တော့ဘူးချစ်﻿သူဖြစ်﻿ကာစဆို﻿တော့ အ﻿လျှော့﻿ပေးလိုက်﻿ပါတယ်﻿အင်းဟာ ဆိုပြီး..ထီးကိုလမ်း﻿ဘေးပစ်﻿ချ သူမနဲ့အတူမိုး﻿ရေထဲ ﻿လျှောက်﻿ရ﻿တော့တာ﻿ပေါ့။
ကဲ နာရီဝက်﻿﻿လောက်﻿﻿လျှောက်﻿ ကျ﻿နော်﻿ မ﻿ပြောဘူးအလွန်﻿ဆုံး တစ်﻿နာရီလား ရ﻿သေးတယ်﻿ခုဟာက သုံးနာရီ ﻿လေးနာရီ﻿လောက်﻿ကိုမိုး﻿ရေထဲမနားတမ်း Run တာဗျာ ﻿သေရချည်﻿ရဲ့လူလည်း ﻿သေမလို ရှင်မလိုပဲနှာ﻿တွေလည်း ﻿ချေ…
ချမ်းလို့ ဂတ်﻿ဂတ်﻿ဂတ်﻿ဂတ်﻿တုန်﻿﻿ တိုတက်နေ﻿ရော…အံမယ်﻿ သူမကိုကြည့်﻿﻿တော့ ﻿အေး﻿ဆေးပဲကိုရီးယားကားထဲက မျက်﻿နှာ﻿ပေးနဲ့လက်﻿ကိုဆန့်﻿ မိုးစက်﻿﻿တွေ ﻿ဆော့ကစား﻿နေ﻿သေးကိုယ့်﻿မှာသာ တစ်﻿ပတ်﻿﻿ကျော်﻿ အပြင်းဖျားတာမနည်း ﻿ဆေးပြန်﻿ကုလိုက်﻿ရတယ်﻿﻿လေအဲ့လို﻿တွေပါဆို။﻿
ရှိ﻿သေးတယ်﻿…ကုန်းပိုးပိုးခိုင်းတဲ့ကိစ္စ။ရတယ်﻿ မလုပ်﻿ဘူး မ﻿ပြောဘူးချစ်﻿သူပဲ အနွံတာခံရမှာ အလိုလိုက်﻿ရမှာ﻿ပေါ့လူရှင်းတဲ့ပန်းခြံ ဒါမှမဟုတ်﻿ တံတား﻿ပေါ်တို့ လမ်းကြားထဲတို့﻿ပေါ့ ဟုတ်﻿ဘူးလား? ခုဟာကလူကြပ်﻿ပါတယ်﻿ဆိုတဲ့ Bus ကား﻿ပေါ်မှာစတိုင်﻿ကျကျလိမ့်﻿ရမယ့်﻿
Junction City & Myanmar Plaza လို﻿နေရာမျိူးမှာ﻿ရွှေတိဂုံဘုရား﻿ပေါ်လို လူထူထပ်﻿တဲ့﻿နေရာမှာရုပ်﻿ရှင်﻿ရုံထဲ ဝင်﻿တာက အစဆူရှီဆိုင်﻿ ကြေးအိုးဆိုင် ထဲ ဝင်﻿သွားတာက အဆုံးအလကား﻿နေ ကုန်းပိုးပိုးခိုင်းတာဗျာ
စဉ်းစားကြည့်﻿…ရည်းစားထားတာ﻿လေမင်္ဂလာ﻿ဈေးက အထုပ်﻿ထမ်းတဲ့ ကူလီမှမဟုတ်﻿ဘဲကြာ﻿တော့ ﻿ကျောကုန်းမှာ ﻿ပွေးလိုလို ညှင်းလိုလို အကွက်﻿အကွက်﻿﻿လေး﻿တွေပါ ﻿ပေါက်﻿လာတဲ့အထိ။
﻿နောက်﻿တစ်﻿ခုက﻿ရောက်﻿﻿လေရာ ဓာတ်﻿ပုံရိုက်﻿ခိုင်းတာ။ရိုက်﻿ပါ မရိုက်﻿နဲ့မ﻿ပြောဘူး ကျ﻿နော်﻿က Camera Menသူမက Photo Model စတွဲကတည်းက ဒီလိုဖြစ်﻿မယ်﻿ သိပြီးသား။ဒါ﻿ပေမယ့်﻿ဗျာ သူမက Over ကိုလုပ်﻿လွန်းတယ်﻿သူ့ပုံ﻿တွေကို သူများနဲ့မတူချင်﻿တာရယ်﻿﻿နေရာကအစ အဆန်း ဖြစ်﻿ချင်﻿တာရယ်﻿အဲ့အချက်﻿﻿တွေက ﻿ရှော့သိပ်﻿တက်﻿ခဲ့တာ။
ဥပမာ- ﻿ရေ﻿မြောင်းထဲဆင်းရိုက်﻿ရတယ်﻿အံမယ်﻿ သူမကကျ ပလက်﻿﻿ဖောင်း﻿ပေါ်မှာထီး﻿လေး﻿ဆောင်း အခန့်﻿သားနဲ့﻿လေ။﻿ပေ 30 ﻿လောက်﻿အမြင့်﻿ကို ﻿လှေကားနဲ့တက်﻿အသဲတယားယား ရင်﻿တလှပ်﻿လှပ်﻿နဲ့ရိုက်﻿ရတယ်﻿ဒင်းက ﻿အောက်﻿မှာ ပန်း﻿လေး﻿တွေကျဲထားတဲ့အလယ်﻿မှာ ပက်﻿လက်﻿﻿လေးလှန်﻿ အိပ်﻿လို့အံမယ် အသည်းပုံလေးပါ လုပ်ထားသေး…Post က အ﻿သေမိုက်﻿ အလန်းဇယားကိုယ့်﻿မှာသာ ﻿ပြုတ်﻿ကျရင်﻿ ကွိကနဲ မျိူးတုန်းမှာ။
ဝမ်းလျား﻿မှောက်﻿ ရိုက်﻿﻿ပေးရတာကတစ်﻿မျိူး﻿ဇောက်﻿ထိုး ရိုက်﻿﻿ပေးရတာကတစ်﻿မျိူးလူကကြာ﻿တော့ ဖုန်﻿အလိမ်းလိမ်းတက်﻿ပြီးသူ﻿တောင်းစား﻿လေးနဲ့ တူမှန်းမသိတူလာတယ်﻿အိမ်﻿ကထွက်﻿လာတော့ အ﻿ကောင်းပြန်﻿﻿ရောက်﻿ရင်﻿ စုတ်﻿ပျက်﻿သတ်﻿﻿နေလို့အိမ်﻿က﻿တောင်﻿ ﻿မေးတယ်﻿ငါ့သား ပန်းရံများ ဝင်﻿ရွက်﻿လာတာလားတဲ့။
ညဘက်﻿ အိပ်﻿﻿ကောင်းတဲ့အချိန်﻿2.နာရီ 3.နာရီ ﻿လောက်﻿ ဖုန်းဆက်﻿ပြီဘာလို့လဲ ﻿မေးကြည့်﻿﻿တော့ရှုးထ﻿ပေါက်﻿တာ သရဲ﻿ကြောက်﻿လို့တဲ့﻿သေ﻿ရော ကိုယ့်﻿မှာ ﻿နေ့တိုင်း အိပ်﻿﻿ရေးကိုပျက်﻿လို့မနက်﻿ဆိုအလုပ်﻿﻿နောက်﻿ကျလို့ Fine တပ်﻿ခံရတယ်﻿ကြာ﻿တော့ မျက်﻿တွင်း﻿ဟောက်﻿ပက်﻿နဲ့မှန်﻿﻿တောင်﻿မကြည့်﻿ရဲဘူးကိုယ့်﻿ရုပ်﻿ကိုယ်﻿ ပြန်﻿ပြန်﻿လန့်﻿မိလို့﻿လေ။
ကျန်﻿﻿သေးတယ်﻿﻿ရောက်﻿တဲ့အရပ်﻿က﻿နေ Video Call ဖွင့်﻿ခိုင်းတဲ့ ကိစ္စ။စဉ်းစားကြည့်﻿﻿လေ တစ်﻿ချိူ့ နေရာ﻿တွေဆိုဘယ်﻿လိုလုပ်﻿ Video Call ﻿ပြောလို့ အဆင်﻿﻿ပြေပါ့မလဲ?သူမက မရဘူး ချက်﻿ချင်းဆို ချက်﻿ချင်းမှ။ကိုယ့်﻿မှာ ﻿ရေချိူးရင်းတန်းလန်း VC ဖွင့်﻿﻿ပြောရတာ﻿ဆောင်းတွင်း﻿အေးရတဲ့အထဲ နာရီ﻿ပေါင်းများစွာVC ﻿ပြောရတာ ﻿ရေစိုလက်﻿စနဲ့လူက အဆုတ်﻿အ﻿အေးမိ﻿ရောဂါပါ ဖြစ်﻿﻿ရော။
ခု﻿တော့လည်း သူမနဲ့ပြတ်﻿သွားပါပြီ﻿လေဒီတစ်﻿ခါ သူမဘက်﻿က အရင်﻿စဖြတ်﻿တာအ﻿ကြောင်းရင်းက တွဲရတာ ပျင်းလာလို့တဲ့﻿လေ﻿ကျေးဇူးများ﻿တောင်﻿ Double တင်﻿﻿သေးအဲ့﻿နေ့က အ﻿ပျော်﻿လွန်﻿ပြီး ﻿တွေ့သမျှ အလှုခံ အကုန်﻿ထည့်﻿ပစ်﻿တာ…တွေ့ကရာလူ Fly kiss တွေချည်းပေးပစ်တာ…။
ခင်﻿ဗျားတို့လည်း သတိထားပါမိန်းခ﻿လေးတစ်﻿﻿ယောက်﻿ သိပ်﻿လှလွန်း﻿နေပါလျက်﻿ Single ဖြစ်﻿﻿နေတယ်﻿Perfect ဖြစ်﻿ပါလျက်﻿နဲ့ ရည်းစားနဲ့မမြဲဘဲမကြာခဏဆိုသလို FA ဖြစ်﻿﻿နေတယ်﻿ဆိုPropose လုပ်﻿ရင် ကြည့်﻿လုပ်ကျပ်﻿မပြည့်﻿ ပြား 90. ﻿တွေ﻿﻿အဲ့ဒါမှ Danger အစစ်﻿တွေ ဖြစ်﻿﻿နေတတ်﻿တယ်﻿﻿လေရွာသာကြီးရောက်﻿ဖို့က 100% ﻿သေချာပြီသာမှတ်﻿ ..။ ။
Credit-soe moe naimg
ဒီကောငျမလေးနဲ့Facebook မှာ Fri ဖွဈနတော အ﻿တျော﻿﻿လေးတော့ ကွာခဲ့ပါပွီ မှတျမှတျရရ 2.နှဈ ﻿လောကျ﻿ ရှိမလားပဲ။
သူမကွညျ့﻿ရတာ…အခဈြ﻿﻿ရေးနဲ့ပတျသကျ﻿လာရငျ﻿ ဇာတာကနြပေုံရတယျတဈ﻿﻿ယောကျ﻿နဲ့မှ Anniversary အထိ မ﻿ရောကျ﻿လိုကျ﻿ဘူးအခြိနျ﻿တနျ﻿ရငျ﻿ ပကျြ﻿သှားတာခညျြးပဲရယျ﻿။
လှတယျ﻿ ﻿တျော﻿﻿တျော့﻿ကိုလှပါတယျ﻿မကျြ﻿လုံး﻿လေး﻿တှဆေို ဝိုငျးစကျပွီးBrown Colour ﻿လေးနဲ့…အသားအ﻿ရကေ ﻿နပေူထဲထှကျ﻿﻿လေ ပိုလှ﻿လေ﻿ ﻿ဥမ်မာဓါနီ ပပဝတီ ဝငျစားသလားထငျမှတျရတယျ ဝငျး﻿နတောပဲရယျ﻿…
အရပျ﻿က မနိမျ့﻿မမွငျ့﻿ မွနျ﻿မာ မိနျးခ﻿လေးပီသတဲ့ Normal Size…ဆံပငျ﻿က အမွဲတမျး Update ဖွဈ﻿တယျ﻿﻿ဖွောငျ့﻿လိုကျ﻿﻿ကောကျ﻿လိုကျ﻿နဲ့ Style ကကပြါ့…တဈ﻿ခါတဈ﻿﻿လေ Live လှငျ့﻿လို့ ကွညျ့﻿မိတယျ﻿အသံ﻿လေးက ﻿မှေးကာစ﻿ခ﻿လေးအတိုငျး
လူပုံစံ﻿လေးက ကိုငျ﻿﻿ပေါကျ﻿ လှငျ့ပဈခငျြ﻿စရာကဈြ﻿ကဈြ﻿လဈြ﻿လဈြ﻿﻿နဲ့ ခဈြ﻿စရာ﻿လေး…စိတျ﻿ထားလညျး ﻿ကောငျးပုံရတယျ﻿ပရဟိတလုပျ﻿တဲ့ Post ခဏခဏ﻿တှရေ့တယျ﻿…အ﻿နအေထိုငျ﻿လညျး ﻿အေး﻿ဆေးပါပဲသိမျ﻿သိမျ﻿﻿မှေ့﻿မှနေဲ့ တညျ﻿ငွိမျ﻿သူ﻿လေး…
ဘာသာတရားလညျး ကိုငျးရှိုငျးတယျ﻿သူ့﻿ Wall ထဲမှာဆို ဘုရားသှား﻿ကြောငျးတကျ﻿အမှတျ﻿တရ Save ထားတဲ့ ပုံ﻿လေး﻿တှခေညျြး…။
ခကျ﻿တာက ဘယျ﻿တဈ﻿﻿ယောကျ﻿ကမှ သူ့အနားရကျ﻿ကွာကွာမ﻿နကွေဘူး မတှဲကွဘူးစှနျ့﻿ခှာထှကျ﻿﻿ပွေးသှားကွတာခညျြးပဲ။
သိရသ﻿လောကျ﻿ သူမက Silent မထားဘူးတှဲလိုကျ﻿ရငျ﻿ Official ပဲ﻿အေး ဒါ﻿ပမေယျ့﻿ မွဲလညျး မမွဲဘူး။
အခု Relationships တကျ﻿တယျ﻿﻿နျော﻿﻿နောကျ﻿ 1.လ 2.လဆို Single ပွနျ﻿ဖွဈ﻿﻿ရောအဲ့﻿တော့ သတိထားမိလာ﻿တော့တာ﻿ပေါ့။
ဘာလား﻿ပေါ့..ဒီ﻿လောကျ﻿လှတဲ့ ﻿ကောငျ﻿မ﻿လေးPerfect ဖွဈ﻿တဲ့ ﻿ကောငျ﻿မ﻿လေးကိုမြားရာရာစစ ထားသှား ပဈ﻿သှားတဲ့သူကရှိ﻿သေးသူ့ Ex ﻿တှေ ﻿တျော﻿﻿တျော﻿တုံးတယျ﻿﻿နောကျ﻿မှ ﻿နောငျ﻿တရ﻿နလေိမျ့﻿မယျ﻿ ဆိုပွီးစိတျ﻿ထဲက သူမအစား ﻿ပွောမိ﻿သေးတယျ﻿။
တဈ﻿ရကျ﻿ သူမတငျ﻿တဲ့ ပုံကိုComment ဝငျ﻿﻿ပေးမိတယျ﻿အဲ့ကစ ဘဝပကျြ﻿﻿တော့မယျ﻿မှနျး ဘယျ﻿သိခဲ့မလဲ?သူမဆီက Reply ပွနျ﻿လာတယျ﻿နောကျ﻿ပိုငျး Chat box မှာ﻿ပွောဖွဈ﻿ကွတယျ﻿﻿﻿ပွောရရငျ﻿ ခငျ﻿မငျ﻿ရငျးနှီးတဲ့အဆငျ့﻿﻿ရောကျ﻿လာတယျ
Video call ﻿ပွောဖွဈ﻿တယျ﻿ အပွငျ﻿မှာ Dating လုပျ﻿ဖွဈ﻿တယျ﻿သိပျ﻿မကွာဘူး ရညျးစား﻿တှေ ဖွဈ﻿သှားတယျ﻿﻿ပေါ့။
သူမ ဘာ﻿ကွောငျ့﻿ ရညျးစားနဲ့မမွဲလဲ?အ﻿ဖွကေို တဈ﻿ဖွညျးဖွညျးနဲ့ သိလာရပွီ﻿လဘေယျ့﻿နှယျ့﻿ သူမက ကပျြ﻿မှ မပွညျ့﻿တာကိုးဘယျ﻿လိုလုပျ﻿ သူ့ဒဏျ﻿ခံနိုငျ﻿မလဲ?
မှတျ﻿မှတျ﻿ရရ ခဈြ﻿သူဖွဈ﻿ပွီး 10.ရကျ﻿﻿ကြျော﻿﻿လောကျ﻿က﻿ပေါ့အဲ့﻿နကေ့ မိုး﻿တှေ သညျးကွီးမညျးကွီးရှာတယျ﻿Aww ကိုယျ﻿က ထီး﻿လေးဖှငျ့﻿﻿ဆောငျးမယျ﻿လုပျ﻿﻿တော့…သူမက
“ဟငျ﻿ ဘာလို့လဲ မိုးရှာ﻿နတေယျ﻿﻿လစေိုကုနျ﻿မှာ﻿ပေါ့”
“မရှညျ﻿နဲ့ ပိတျ﻿ဆိုပိတျ﻿လာ မိုး﻿ရထေဲလမျး﻿လြှောကျ﻿ရ﻿အောငျ﻿Romantic ဆနျ﻿တာ﻿ပေါ့” တဲ့။
ကိုယျ﻿လညျး အတိုကျ﻿အခံ လုပျ﻿မ﻿နေ﻿တော့ဘူးခဈြ﻿သူဖွဈ﻿ကာစဆို﻿တော့ အ﻿လြှော့﻿ပေးလိုကျ﻿ပါတယျ﻿အငျးဟာ ဆိုပွီး..ထီးကိုလမျး﻿ဘေးပဈ﻿ခြ သူမနဲ့အတူမိုး﻿ရထေဲ ﻿လြှောကျ﻿ရ﻿တော့တာ﻿ပေါ့။
ကဲ နာရီဝကျ﻿﻿လောကျ﻿﻿လြှောကျ﻿ ကြ﻿နျော﻿ မ﻿ပွောဘူးအလှနျ﻿ဆုံး တဈ﻿နာရီလား ရ﻿သေးတယျ﻿ခုဟာက သုံးနာရီ ﻿လေးနာရီ﻿လောကျ﻿ကိုမိုး﻿ရထေဲမနားတမျး Run တာဗြာ ﻿သရေခညျြ﻿ရဲ့လူလညျး ﻿သမေလို ရှငျမလိုပဲနှာ﻿တှလေညျး ﻿ခြေ…
ခမျြးလို့ ဂတျ﻿ဂတျ﻿ဂတျ﻿ဂတျ﻿တုနျ﻿﻿ တိုတကျနေ﻿ရော…အံမယျ﻿ သူမကိုကွညျ့﻿﻿တော့ ﻿အေး﻿ဆေးပဲကိုရီးယားကားထဲက မကျြ﻿နှာ﻿ပေးနဲ့လကျ﻿ကိုဆနျ့﻿ မိုးစကျ﻿﻿တှေ ﻿ဆော့ကစား﻿နေ﻿သေးကိုယျ့﻿မှာသာ တဈ﻿ပတျ﻿﻿ကြျော﻿ အပွငျးဖြားတာမနညျး ﻿ဆေးပွနျ﻿ကုလိုကျ﻿ရတယျ﻿﻿လအေဲ့လို﻿တှပေါဆို။﻿
ရှိ﻿သေးတယျ﻿…ကုနျးပိုးပိုးခိုငျးတဲ့ကိစ်စ။ရတယျ﻿ မလုပျ﻿ဘူး မ﻿ပွောဘူးခဈြ﻿သူပဲ အနှံတာခံရမှာ အလိုလိုကျ﻿ရမှာ﻿ပေါ့လူရှငျးတဲ့ပနျးခွံ ဒါမှမဟုတျ﻿ တံတား﻿ပျေါတို့ လမျးကွားထဲတို့﻿ပေါ့ ဟုတျ﻿ဘူးလား? ခုဟာကလူကွပျ﻿ပါတယျ﻿ဆိုတဲ့ Bus ကား﻿ပျေါမှာစတိုငျ﻿ကကြလြိမျ့﻿ရမယျ့﻿
Junction City & Myanmar Plaza လို﻿နရောမြိူးမှာ﻿ရှတေိဂုံဘုရား﻿ပျေါလို လူထူထပျ﻿တဲ့﻿နရောမှာရုပျ﻿ရှငျ﻿ရုံထဲ ဝငျ﻿တာက အစဆူရှီဆိုငျ﻿ ကွေးအိုးဆိုငျ ထဲ ဝငျ﻿သှားတာက အဆုံးအလကား﻿နေ ကုနျးပိုးပိုးခိုငျးတာဗြာ
စဉျးစားကွညျ့﻿…ရညျးစားထားတာ﻿လမေင်ျဂလာ﻿ဈေးက အထုပျ﻿ထမျးတဲ့ ကူလီမှမဟုတျ﻿ဘဲကွာ﻿တော့ ﻿ကြောကုနျးမှာ ﻿ပှေးလိုလို ညှငျးလိုလို အကှကျ﻿အကှကျ﻿﻿လေး﻿တှပေါ ﻿ပေါကျ﻿လာတဲ့အထိ။
﻿နောကျ﻿တဈ﻿ခုက﻿ရောကျ﻿﻿လရော ဓာတျ﻿ပုံရိုကျ﻿ခိုငျးတာ။ရိုကျ﻿ပါ မရိုကျ﻿နဲ့မ﻿ပွောဘူး ကြ﻿နျော﻿က Camera Menသူမက Photo Model စတှဲကတညျးက ဒီလိုဖွဈ﻿မယျ﻿ သိပွီးသား။ဒါ﻿ပမေယျ့﻿ဗြာ သူမက Over ကိုလုပျ﻿လှနျးတယျ﻿သူ့ပုံ﻿တှကေို သူမြားနဲ့မတူခငျြ﻿တာရယျ﻿﻿နရောကအစ အဆနျး ဖွဈ﻿ခငျြ﻿တာရယျ﻿အဲ့အခကျြ﻿﻿တှကေ ﻿ရှော့သိပျ﻿တကျ﻿ခဲ့တာ။
ဥပမာ- ﻿ရေ﻿မွောငျးထဲဆငျးရိုကျ﻿ရတယျ﻿အံမယျ﻿ သူမကကြ ပလကျ﻿﻿ဖောငျး﻿ပျေါမှာထီး﻿လေး﻿ဆောငျး အခနျ့﻿သားနဲ့﻿လေ။﻿ပေ 30 ﻿လောကျ﻿အမွငျ့﻿ကို ﻿လှကေားနဲ့တကျ﻿အသဲတယားယား ရငျ﻿တလှပျ﻿လှပျ﻿နဲ့ရိုကျ﻿ရတယျ﻿ဒငျးက ﻿အောကျ﻿မှာ ပနျး﻿လေး﻿တှကြေဲထားတဲ့အလယျ﻿မှာ ပကျ﻿လကျ﻿﻿လေးလှနျ﻿ အိပျ﻿လို့အံမယျ အသညျးပုံလေးပါ လုပျထားသေး…Post က အ﻿သမေိုကျ﻿ အလနျးဇယားကိုယျ့﻿မှာသာ ﻿ပွုတျ﻿ကရြငျ﻿ ကှိကနဲ မြိူးတုနျးမှာ။
ဝမျးလြား﻿မှောကျ﻿ ရိုကျ﻿﻿ပေးရတာကတဈ﻿မြိူး﻿ဇောကျ﻿ထိုး ရိုကျ﻿﻿ပေးရတာကတဈ﻿မြိူးလူကကွာ﻿တော့ ဖုနျ﻿အလိမျးလိမျးတကျ﻿ပွီးသူ﻿တောငျးစား﻿လေးနဲ့ တူမှနျးမသိတူလာတယျ﻿အိမျ﻿ကထှကျ﻿လာတော့ အ﻿ကောငျးပွနျ﻿﻿ရောကျ﻿ရငျ﻿ စုတျ﻿ပကျြ﻿သတျ﻿﻿နလေို့အိမျ﻿က﻿တောငျ﻿ ﻿မေးတယျ﻿ငါ့သား ပနျးရံမြား ဝငျ﻿ရှကျ﻿လာတာလားတဲ့။
ညဘကျ﻿ အိပျ﻿﻿ကောငျးတဲ့အခြိနျ﻿2.နာရီ 3.နာရီ ﻿လောကျ﻿ ဖုနျးဆကျ﻿ပွီဘာလို့လဲ ﻿မေးကွညျ့﻿﻿တော့ရှုးထ﻿ပေါကျ﻿တာ သရဲ﻿ကွောကျ﻿လို့တဲ့﻿သေ﻿ရော ကိုယျ့﻿မှာ ﻿နတေို့ငျး အိပျ﻿﻿ရေးကိုပကျြ﻿လို့မနကျ﻿ဆိုအလုပျ﻿﻿နောကျ﻿ကလြို့ Fine တပျ﻿ခံရတယျ﻿ကွာ﻿တော့ မကျြ﻿တှငျး﻿ဟောကျ﻿ပကျ﻿နဲ့မှနျ﻿﻿တောငျ﻿မကွညျ့﻿ရဲဘူးကိုယျ့﻿ရုပျ﻿ကိုယျ﻿ ပွနျ﻿ပွနျ﻿လနျ့﻿မိလို့﻿လေ။
ကနျြ﻿﻿သေးတယျ﻿﻿ရောကျ﻿တဲ့အရပျ﻿က﻿နေ Video Call ဖှငျ့﻿ခိုငျးတဲ့ ကိစ်စ။စဉျးစားကွညျ့﻿﻿လေ တဈ﻿ခြိူ့ နရော﻿တှဆေိုဘယျ﻿လိုလုပျ﻿ Video Call ﻿ပွောလို့ အဆငျ﻿﻿ပွပေါ့မလဲ?သူမက မရဘူး ခကျြ﻿ခငျြးဆို ခကျြ﻿ခငျြးမှ။ကိုယျ့﻿မှာ ﻿ရခြေိူးရငျးတနျးလနျး VC ဖှငျ့﻿﻿ပွောရတာ﻿ဆောငျးတှငျး﻿အေးရတဲ့အထဲ နာရီ﻿ပေါငျးမြားစှာVC ﻿ပွောရတာ ﻿ရစေိုလကျ﻿စနဲ့လူက အဆုတျ﻿အ﻿အေးမိ﻿ရောဂါပါ ဖွဈ﻿﻿ရော။
ခု﻿တော့လညျး သူမနဲ့ပွတျ﻿သှားပါပွီ﻿လဒေီတဈ﻿ခါ သူမဘကျ﻿က အရငျ﻿စဖွတျ﻿တာအ﻿ကွောငျးရငျးက တှဲရတာ ပငျြးလာလို့တဲ့﻿လေ﻿ကြေးဇူးမြား﻿တောငျ﻿ Double တငျ﻿﻿သေးအဲ့﻿နကေ့ အ﻿ပြျော﻿လှနျ﻿ပွီး ﻿တှသေ့မြှ အလှုခံ အကုနျ﻿ထညျ့﻿ပဈ﻿တာ…တှကေ့ရာလူ Fly kiss တှခေညျြးပေးပဈတာ…။
ခငျ﻿ဗြားတို့လညျး သတိထားပါမိနျးခ﻿လေးတဈ﻿﻿ယောကျ﻿ သိပျ﻿လှလှနျး﻿နပေါလကျြ﻿ Single ဖွဈ﻿﻿နတေယျ﻿Perfect ဖွဈ﻿ပါလကျြ﻿နဲ့ ရညျးစားနဲ့မမွဲဘဲမကွာခဏဆိုသလို FA ဖွဈ﻿﻿နတေယျ﻿ဆိုPropose လုပျ﻿ရငျ ကွညျ့﻿လုပျကပျြ﻿မပွညျ့﻿ ပွား 90. ﻿တှေ﻿﻿အဲ့ဒါမှ Danger အစဈ﻿တှေ ဖွဈ﻿﻿နတေတျ﻿တယျ﻿﻿လရှောသာကွီးရောကျ﻿ဖို့က 100% ﻿သခြောပွီသာမှတျ﻿ ..။ ။
သင်္ဘောသီးတွေ ပက်ပက်စက်စက် သီးအောင် စိုက်ပျိုးနည်း…!
နေကြာစေ့စားသုံးခြင်းဖြင့် ရရှိလာမယ့် အံ့မခန်းအကျိုးကျေးဇူး (၁၀)မျိုး…!
This Month : 40433
This Year : 235831
Total Users : 594855
Total views : 2731635